Reputology: Nidaamka Digniinta ee Dib u Eegista Onlineka | Martech Zone
Reputology: Nidaamka Digniinta ee Dib u Eegista Onlineka
Khamiista, Oktoobar 10, 2013 Khamiista, Oktoobar 10, 2013 Douglas Karr
Waxaan dhowaan la wadaagnay dib u eegistayada internetka iyo kuwa kale teknoolojiyada ayaa saameyn ku leh warshadaha makhaayadaha. Internet ah is aaladda goto ee lagu ansaxinayo shirkadaha adeegga, maqaayadaha, iyo dukaamada kale. Dib-u-celinta waa dib-u-eegis dib-u-eegis iyo warbixin. Waxay u dirtaa ogeysiis emayl markasta oo qof dib u eegis ku sameeyo ganacsigaaga Yelp, Google+ Local, Tripadvisor iyo goobaha kale ee dib u eegista. Iyagoo si deg deg ah uga jawaabaya, macaamiisheenu waxay heli karaan dib u eegis aan faraxsaneyn si ay u badalaan maskaxdooda 70% waqtiga.
Digniinta Emailka Reputology
Marka laga eego dhinaca Hawlaha, Reputology waxay sahlaysaa in la ogaado arrimaha soo noqnoqda iyadoo la isu geeyo lana falanqeeyo xogtaada. Waxay soo dirtaa warbixinno kooban oo toddobaadle / bille ah oo kooban, waana lagu siinayaa Analytics si loola socdo waxqabadka dib u eegistaada.
Si Deg Deg Ah Ugajawaab - Hel ogeysiis emayl xasaasi u ah. Xiriiriyaha emaylka ayaa ku tusaya halka ay dib u eegistu markii hore ka muuqatay.
La Soco Goobo Badan - Ogeysiisyada jidka loo maro dadka saxda ah & isticmaal warbixinno kooban si loo ogaado arrimaha saameeya ganacsiga oo dhan.
Lasoco Waxqabadkaaga - Falanqaynta waxay fududeyneysaa in la fahmo sida mitirrada muhiimka ahi u socdaan iyo isbarbar dhiga goobaha.
Shirkadaha sida Liiska Angie (macmiilkayagu) wuxuu haystaa ogeysiisyo iyo xitaa dhexdhexaadin si looga caawiyo shirkadaha adeegga in ay u digtoonaan oo ay uga soo kabtaan arrimaha khuseeya adeegga macaamiisha… laakiin bogagga kale ee furan sida baahsan ee dib u eegista beenta ah (Akhriso: 19 shirkado SEO ah ayaa dhowaan lagu ganaaxay magaalada New York).
Isdiiwaangelinta digniinta dib-u-eegista ayaa ah tallaabada ugu horreysa ee meheraddaada ay ugu kuurgelayso ugana jawaabayso cabashooyinka… been abuur ama run ah!
Tags: Google+ GudahaFaallooyinka internetkareputologydib u eegista digniintadib u eegista falanqayntaReviewsTripadvisorYelp
Sidee Teknoolojiyaddu u saamaysaa meesha aan wax ka cunno
Waa maxay sababta keywords Google Hiding ay u fiicantahay suuqleyda